Chikonzero nei "Kuda uye Kuchinja" Kunowedzera Kukuvadza Kupfuura Zvakanaka - Dzidziso yeZvibvumirano Nenyanzvi yeSemalt, Natalia Khachaturyan
Sangano Rokutsigira Semalt , Natalia Khachaturyan, anotaura kuti maitiro uye kushandiswa kwekutengeserana kwave kuri kwenguva refu uye yakashanda makore akapfuura. Asi iye zvino, hazvibatsiri. Vatengi iko zvino kaviri vakangwara sezvavakamboita uye mazamu akadai haasisiri ese sezvaaimbova - vps budget.
Nzira yekuti "Bhuku neKushandura" mabasa
Kungofanirwa kujekesa, kumira uye kushandura ndicho chiito chokuzivisa nemaune chigadzirwa chisingawaniki, uye kana chirongwa chikaitwa, panzvimbo yekuzadzisa urongwa, iwe uchaedza kutengesa chinhu chakafanana chinowanzokwirira in cost. Izvi zvinoreva kuti vatengi vave "vaited" nemutengo wakaderera mutengo uye pavanenge vari muchitoro, mutengesi zvino anoedza "kuchinja" chigadzirwa kune mumwe uye nemutengo wakakwirira.
Chirevo chacho chakashata uye chisina maturo, kunyanya kubva kune vatengi. Zvisinei, zvingaratidzika zvakanaka kubva kumutengesi. Ichi ndicho chikonzero chinonzi kushambadzira kwenhema. Zvechokwadi, vazhinji vadzimai vemabhizimisi vashoma vanoita izvi zvisingazivi, asi vamwe vanozviita nechinangwa.
Kuti urege kupinda mumatambudziko nechiito ichi chekunyengedza, vamwe vatengesi vanowanzoisa chibvumirano pasi pechirongwa chinongova nhamba shoma chete yechigadzirwa chiripo. Nenzira iyo, vari kuedza kuchengetedza musana wavo wakavharwa uye kuratidzira kuti vanongomhanya kunze kwechimwe chigadzirwa mushure mokutumira chikwata uye vari kuedza kupa izvo zviripo.
Imwe nyengeri mutengesi anogona kushandisa kuti asvike nekutengesa kwenhema ndeyekuti chiziviso chinenge chichibudiswa muzvitoro asi chiri kuedza kuita shanduko kutanga..
Kunyange zvazvo pasina chakakanganisika nekukwevera kana kuti "kutengesa" vatengi, nyaya chaiye iri kuchinja zvavanenge vachizivisa. Imwe nzira yakadaro kune iyi ndiyo inogona kunzi "bait uye kupa." Pano, kambani inokumbira kero ye email yevatengi vasati vatengesa chibereko chakakumbirwa. Hapana chaicho chakakanganisika netsika iyi sezvo chigadzirwa chisina kuchinjwa. Kutora kero ye email hakuna kuipa. Sezvambotaurwa kare, dambudziko rega kuchinja.
Nyaya dzinowanzojairika uye kuchinja zviitiko zvekutengesa
Haasi makambani ose anoshanda mubhait uye anoshandura anoita izvi nemaune. Vamwe vavo vaiita basa rakadaro nenzira isina kururama. Heano dzimwe dzedzidzo dzakawanda dzavanoshandisa:
Kukwezva motokari kune chigadzirwa chako uchishandisa zita romupikisi
Izvi zvinowanzoitika apo iwe unotsanangura chigadzirwa chako semuiti wekwikwidzi wako. Izvi zvinopesana nevatengi kuti vakanise chibvumirano kufunga kuti chimwe chigadzirwa. Somuenzaniso, kana zita remakadhi enyu eHughes Pauro uye iwe uchivarondedzera se HP laptops, vatengi vachavakanganisa pamakadhi akakurumbira eHewlett Packard uye chengetedza unhu hwenyu.
Kushandiswa kwemashoko asina kukodzera kana asinganzwisisiki eSeO bait uye shanduko
Mukuda kwekukwirira zvakanyanya nyore, vamwe vatengesi vanoshandisa mazwi emazwi asingabatsiri kubhizinesi ravo nekuda kwekuti pane kukwikwidzana kwakakomberedza mazwi makuru. Ava vatengesi vanongoda kufarira.
Unofanirwa kunzwisisa kuti iwe paunenge uchikwirira zvakanyanya sezvaunoshuva, hazvizogadziri kutengeswa kwauri. Iwe hausi mubhizimisi kuti uite kutengesa here? Funga nezveizvi, kana iwe uchitengesa laptops uye iwe uchishandisa mazwi anokosha anowanikwa kune printers yeSeO, vanhu vanoda kutenga mabhizimisi vachanyatsotsinhanisa hutano hwako uye vakashanyira ma webhusi enyu, asi havazoiti chero chirongwa nokuti havatengi kutengesa michina !!!
Unoziva here kuti iwe uri kukweretwa kwega roga roga pane zvido zvako paIndaneti kana inoshandiswa kutengeswa kana kwete? Iyi nzira inodhura inonzi "black hat" inonzi SEO term. Neyo nzira, uri kushanda kune "100% traffic & 0% sales".